IMIBONGO YOTHANDO: IMIBONGO ENGAMA-55 NGOTHANDO - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Imibongo engama-55 yothando ngalo lonke ixesha
Imibongo engama-55 yothando ngalo lonke ixesha
Imibongo yothando yindlela elungileyo yokubonisa iimvakalelo zakho! Xelela uthando lwakho lokwenyani indlela oziva ngayo ngale mibongo ngothando.
UKathleen McCann West ungumshicileli ozimeleyo kunye nomncedisi wentengiso.
UKathleen wenza umxholo okwizinga eliphezulu etsala umdla kwaye abonelele ngexabiso kubathengi.
UKathleen wenza igalelo kwiKnot njengombhali ozimeleyo.
Ukuhlaziywa ngoMeyi 20, 2020 UMegan Rubey
Imibongo emikhulu yothando inokukwenza uhleke, ukhale okanye udikiwe. Yonke imbongi, evela kuma-classic greats afana noWilliam Shakespeare noWalt Whitman, ukuya kwiintandokazi zanamhlanje njengoMaya Angelou noMary Oliver, ubhale imibongo ngothando, ethululela iintliziyo zabo kwiphepha ukuze silonwabele iminyaka ezayo.
Ukuba ufuna umbongo wothando oza kuwufunda emtshatweni wakho okanye ubhalele umntu okhethekileyo ekhadini, okanye mhlawumbi ukwimeko yothando-funda kuluhlu lweyona mibongo ilungileyo yothando ngalo lonke ixesha. Nokuba ujonge imibongo ngothando oluhle kwaye olunzulu okanye olungamampunge noluswiti, sikufumene.
Skrolela ukuze ufunde uluhlu olupheleleyo lweenkondlo ngothando okanye utsibe umbongo wothando malunga neemfuno zakho ezingezantsi:
Iivesi zebhayibhile malunga nothando
Imibongo yothando kuye
Imibongo yothando ngaye
Imibongo emifutshane yothando
Imibongo emitsha / emnandi yothando
Eyona Mibongo yothando
Imihobe yothando ehlekisayo
Imibongo enzulu yothando
Imihobe yothando yaseSpain
Ngaba ujonge imibongo ngothando lokwabelana nentombi yakho okanye umfazi? Olu khetho lwemibongo yothando kuye-ukusuka kwisimbo esibukhali sikaCharles Bukowski ukuya kwezothando zikaKenneth Patchen-kuqinisekisiwe ukuba kuyenza intliziyo yakhe ibhabhe.
'Raw ngothando' nguCharles Bukowski
Imigca Uyakuyithanda: 'Ndiyakukhumbula ukwanga / imilebe yethu iluhlaza ngothando / kwaye undinike njani / yonke into onayo / kunye nendlela / endikunike ngayo okushiyekileyo / kum.'
'Ilizwe Elithuleyo' nguJeffrey McDaniel
Imigca Uyakuyithanda: 'Ndiyazi ukuba uwasebenzisile onke amazwi akhe / ndiye ndicothoze ndiyakuthanda / amashumi amathathu anesibini kunye neyesithathu / Emva koko, sihlala nje emgceni / simamele omnye umntu ephefumla.'
'Ngoku ulele i-Crimson Petal' ngu-Alfred, Lord Tennyson
Imigca Uya kuyithanda: 'Ngoku usongele iinyibiba bonke ubumnandi bakhe phezulu / Kwaye ungene kwisifuba sedike / Zisonge, sithandwa sam, wena, kwaye ungene / ungene esifubeni sam kwaye ulahleke kum.'
'Ifilosofi yothando' nguPercy Bysshe Shelley
Imigca Uya kuyithanda: 'Akukho dade-ntyatyambo uya kuxolelwa / Ukuba uyamdelela umzalwana wakhe / Kwaye ukukhanya kwelanga kuhlanganisa umhlaba / Kwaye iinyanga zenyanga zilubanga ulwandle / Uyintoni lo msebenzi umnandi / Ukuba awundanga?'
'Njengokuba senziwe ngokumangalisayo omnye nomnye' nguKenneth Patchen
Imigca Uya kuyithanda: 'Kulungile ukuba utyhafe kuloo msebenzi ubalaseleyo / Kukuba nguThixo ukuba uve ukuphefumla kwakho phantsi kwam / Isiglasi samanzi kwi-ofisi sigcwalisa kusasa / Ungavumeli nabani na ukuba asivuse.'
Imibongo yothando ayenzelwanga yena-uninzi lweembongi zibhale ii-odes emadodeni ebomini babo, nazo. Nokuba luthando olumsulwa uSir Philip Sidney uveza kwisibongo sakhe sodidi, okanye imvakalelo kaMargaret Atwood, nayiphi na le mibongo yothando kuye igqibelele indoda ebomini bakho.
'Uthando lwam lokwenene lunentliziyo yam' ngu-Sir Philip Sidney
Imigca Uyakuyithanda: 'Intliziyo yakhe kum indigcina mna kuye / Intliziyo yam kuye iingcinga zakhe kunye nezikhokelo zengqondo / Uyayithanda intliziyo yam, kuba kwakube yeyakhe / ndiyayixabisa kuba ikum.
'Ubusuku basendle - Ubusuku obusendle!' NguEmily Dickinson
Imigca Uya kuyithanda: 'Ukurola e-Eden / Ah-kuLwandle! / Ngaba ndinganako kodwa-ngokuhlwanje / kuwe!'
'Ngokuhlwa kobusuku' nguMargaret Atwood
Imigca Uya kuyithanda: 'Shicilela umbongo, nguwe ndifuna / incasa yakho, imvula / kuwe, umlomo kulusu lwakho.'
'Kumntu ongamaziyo' nguLorna Dee Cervantes
Imigca Uya kuyithanda: 'Entanyeni yentliziyo yam eyimfihlo / apho uya khona ukufudumala kwam / ukuluma kweso sonka apho iimvuthuluka ziqhekeza / kwaye zisasaze kwaye zisondle imiphefumlo yethu / ukuba ubuyilitye / ukuphosa, ukuba bendinokukufumana. '
'Kumyeni wam othandekayo nothandayo' Ngu-Anne Bradstreet
Imigca Uya kuyithanda: 'Uthando lwakho alunako ukuhlawula / Amazulu akuvuza ngokuphindaphindiweyo, ndiyathandaza / Emva koko xa siphila, ngothando masinyamezele / Ukuze xa singaphili, siphile ngonaphakade.'
Ngamanye amaxesha amagama athi 'Ndiyakuthanda' awanelanga ukubonisa indlela oziva ngayo. Imibongo ngothando yindawo elungileyo ukuqala! Xa ufuna ukuthetha ngakumbi kulowo umthandayo kunala magama mathathu mancinci, uboleke imigca embalwa kule mibongo yothando yakudala.
'Isintaksi' nguCarol Ann Duffy
Imigca Uya kuyithanda: 'Ngenxa yokuba ndenza njalo / njengoko sisitsho ngoku-ndifuna ukuthi / wena, ndiyakuthanda, ndiyakuthanda / kwaye ndiyazi emilebeni yam / is syntax yothando luhlala / kwaye ujonge emehlweni akho . '
'Ndikuthanda Njani? (Sonnet 43) ngu-Elizabeth Barrett Browning
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndiyakuthanda kubunzulu nobubanzi nokuphakama / Umphefumlo wam unokufikelela, xa uziva ungabonakali / Ukuphela kobabalo nobabalo olufanelekileyo.'
'Enye iValentine' nguWendy Cope
Imigca Uyakuyithanda: 'Uthando lwethu ludala kwaye luqinisekile, alukho lutsha kwaye lungaxolanga / Uyazi ukuba ndingowakho kwaye ndiyazi ukuba ungowam / Kwaye ukusitsho oko kundenze ndaziva ndithandana / Uthando lwam oluthandekayo, valentine yam endiyithandayo.'
'Ndiyakuthanda' ngu-Ella Wheeler Wilcox
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndicofe kufutshane neengalo zakho ezishushu ezishushu / Ngelixa iinkwenkwezi eziluthuthu zikhanya ngaphezulu / Kwaye siza kuphila ubomi bethu obutsha / kuvuyo lothando oluphilayo.'
'Ndinikela lo Mbongo' nguJimmy Santiago Baca
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndiyakuthanda / Yonke into endinokukunika yona / kwaye wonke umntu kufuneka aphile / kwaye aqhubeke nokuphila ngaphakathi / xa umhlaba ungaphandle / ungakhathali nokuba uyaphila okanye uyafa / khumbula / ndiyathanda wena. '
Iimbongi eziphambili zidlulisa iimvakalelo ezininzi ngamagama ambalwa kangaka. Ngokufutshane, mfutshane kwaye ukuya kwinqanaba, le mibongo malunga nothando ibonisa into ozama ukuyithetha ngaphandle kokuyidlula. Ukuba ukhangela imibongo emifutshane yothando ukuba ubhale kwinqaku lakho ukuze utyumze okanye wabelane nomntu osondeleyo kuwe, uya kuyifumana apha.
'Iisenti ezingama-30, ukuTshintshela kwabaBini, uThando' nguRichard Brautigan
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndicinga nzima ngawe / ndikhwele ibhasi / ndahlawula iisenti ezingama-30 yokuhamba ngemoto / ndaza ndacela umqhubi ukuba atshintshele kabini / ngaphambi kokufumanisa / ukuba ndandindedwa / ndedwa.'
'6:59 AM' nguShane Koyczan
Imigca Uyakuthanda: 'Ndixelelwe / ukuba abantu emkhosini / benze ngaphezulu nge-7: 00 am / kunokuba ndenza / imini yonke / kodwa ukuba ndivuka / ngo-6: 59 am / ndize ndibuyele wena / ukulandelela isishwankathelo semilebe yakho / nesam / ngekhe ndenze ngokwaneleyo / kwaye andizukubulala mntu / kule nkqubo. '
'Umboniso' nguWalt Whitman
Imigca Uyakuyithanda: 'Ixesha elide phakathi kwengxolo yokuza nokuhamba, ukusela kunye nokufunga kunye nokuhlekisa / Kukho thina sobabini, sanelisekile ngokuba kunye, sithetha kancinci, mhlawumbi kungabikho lizwi.'
'Ukuthatha izandla' nguRobert Bly
Imigca Uyakuyithanda: 'Ukuthatha izandla zomntu omthandayo / Uyabona ukuba ziikheyiji ezintle / Iintaka ezincinci ziyacula / Kumathafa azimeleyo / nakwiintlambo ezinzulu zesandla.'
'Isifanekiso se-Eros' nguZenodotos
Imigca Uya kuyithanda: 'Ngubani oqingqe uthando / kwaye wambeka / lo mthombo / ucinga / wayenokulawula / umlilo / ngamanzi?'
Siqokelele uluhlu lwemibongo yothando edumileyo eye yanxibelelana nabaphulaphuli amashumi eminyaka-kwaye kwezinye iimeko, iinkulungwane. Kungenxa yokuba uthando luyimvakalelo yabucala kodwa ingekho kwindalo iphela. Uya kufuna ukwabelana ngale mibongo malunga nothando nomntu okhetheke kakhulu!
'Sonnet 116' nguWilliam Shakespeare
Imigca Uyakuyithanda: 'Uthando aluguquki ngeeyure kunye neeveki zakhe ezimfutshane / Kodwa uyinyamezele ukuya kuthi xhaxhe ngentshabalalo / Ukuba oku kuyimpazamo nakum ndicinga / andikaze ndibhale, kwaye akukho mntu wakha wathanda . '
'UAnnabel Lee' nguEdgar Allan Poe
Imigca Uya kuyithanda: 'Bendi ngumntwana kwaye ebengumntwana / Kobu bukumkani ngaselwandle / Kodwa besithanda ngothando olungaphezulu kothando / Mna noAnnabel Lee wam / Ngothando olunazo iiserafi ezinamaphiko izulu / ndimnqwenela kunye nam. '
'Isantya seNkosi' nguRobert Frost
Imigca Uya kuyithanda: 'Ababini abanjengawe ngesantya esiphezulu / Ungehlulwa okanye utshayelwe / Ukusuka komnye xa nivumelane / Obo bomi bubomi obungunaphakade
'Olubomvu, obomvu uRose' nguRobert Burns
Imigca Uya kuyithanda: 'Kuze kube' lulwandle olomileyo, sithandwa sam / Kwaye amatye anyibilika 'elangeni / ndiya kukuthanda nangoku, sithandwa sam / Ngelixa isanti o' ubomi bubaleka. '
Inkwenkwezi eqaqambileyo, ngaba bendinokuqina njengawe 'nguJohn Keats
Imigca Uya kuyithanda: 'Pillow'd phezu kwam uthando oluhle lokuvuthwa kwamabele / Ukuziva ngonaphakade ukuwa kwalo kunye nokuvuvukala / Vuka ngonaphakade kwisiphithiphithi esimnandi / Ndisaqhubeka nokuva ukuphefumla kwakhe okuphefumlelweyo / kwaye ke niphile ngonaphakade - okanye kungenjalo bafa ukufa. '
Ukuba ulwalamano lwakho lutsha njengentyatyambo yokuqala yasentwasahlobo, unokufuna ukukhetha imibongo yothando oluhle, okanye umbongo omnandi wothando ukwenza umntu wakho okhethekileyo ancume. Le mibongo yothando yindawo efanelekileyo yokuqala-awuyi kuba nakho ukumelana nomtsalane wabo olula. Inqaku- Umbongo othi 'Ndiyakuthanda ukuya eNyangeni naseMva' ululuhlu!
'Ukuba neCoke nawe' nguFrank O'Hara
Imigca oya kuyithanda: 'Ndijonge / ndijongile kwaye ndingathanda ukujonga kuwe kunayo yonke imizobo esehlabathini / ngaphandle komkhweli wasePoland ngamanye amaxesha kwaye kunjalo kwiFrick / ebulela amazulu ongakhange uye kuyo kodwa ke singahamba kunye okokuqala. '
'Ndiyakuthanda kwinyanga nasemva' nguPetai Jirakongpipat
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndiyakuthanda emaphethelweni esibhakabhaka / Nokuba litshona ilanga okanye ilanga / Oo wam / ndiyakuthanda enyangeni nasemva.'
'Hug O'War' nguShel Silverstein
Imigca Uya kuyithanda: 'Andizukudlala kwi-tug O'war / ndingathanda ukudlala kwi-hug O'war / Apho wonke umntu egona khona / Endaweni yokutsala / Apho wonke umntu egigitheka / Aqengqele erugini / Apho wonke umntu amange / Kwaye wonke umntu uyabila / Kwaye wonke umntu uyabamba / Kwaye wonke umntu uyaphumelela. '
'Ukuwa eluthandweni kufana nokuba nenja' nguTaylor Mali
Imigca Uya kuyithanda: 'Phosa izinto kude kwaye uthando luya kubabuyisa / kwakhona, kwaye kwakhona, kwaye kwakhona / Kodwa ngaphezulu kwako konke, uthando ludinga uthando, uninzi lwalo / Kwaye ukubuya, uthando luyakuthanda kwaye aluze luyeke.'
'Sobabini' nguA. UMilne
Imigca Uya kuyithanda: 'Ke naphi na apho ndikhoyo, kuhlala kukho uPooh / kusoloko kukho uPooh kunye nam /' bendiya kwenza ntoni? ' Ndithe kuPooh / 'Ukuba ibingenguwe,' kwaye uPooh wathi: 'Kuyinyani / Ayimnandanga into enye, kodwa ezimbini / ziyakwazi ukuhlangana, utshilo uPooh. Injalo ke, utsho uPooh.
Eyona mibongo yothando ilungiselelwe ukuba ifundwe emtshatweni wakho, ufundelwe umntu omthandayo okanye ubonakalise ngokubonakalayo eludongeni lwakho-okanye nakulusu lwakho! Le mibongo ngothando ayinakukunceda kodwa isinike uluvo. Ukuba ujonge abantu abathandayo, jonga ingqokelela yethu ye-EE Cummings imibongo yothando, imibongo yothando lukaRumi, kunye nezinye ezininzi!
'[Ndiyiphatha ngentliziyo yakho (ndiyayiphatha]' Ngu-E. E. Cummings
Imigca Uyakuyithanda: 'Ndiyoyika / ngekamva (kuba ikamva lam, iswiti yam) ndifuna / akukho hlabathi (ngobuhle ulilizwe lam, uyinyani) / kwaye uyinto oyinyanga inyanga ibisoloko ichaza / Kwaye nantoni na eya kuhlala iculwa lilanga nguwe. '
'Ukujonga ubuso bakho' nguRumi
'Namhlanje ndibubonile / umtsalane, ubuhle, kunye / nobabalo obungenakuqondakala / bobuso ebendikade ndibukhangela.'
'Thandanani' nguKhalil Gibran
Imigca Uya kuyithanda: 'Nazalwa kunye, kwaye niya kuba kunye ngonaphakade / Uya kuba kunye xa amaphiko amhlophe okufa esasaza iintsuku zakho / Ay, niya kuba kunye nakwinkumbulo kaThixo / Kodwa makubekho zenzani isithuba kubumbano lwenu / kwaye imimoya yezulu mayidanise phakathi kwenu. '
'Ukuchukunyiswa Yingelosi' nguMaya Angelou
Imigca Uya kuyithanda: 'Silunyulwe kubuthathaka bethu / Ekukhanyeni kothando' iyasikhulula. '
'Uhamba ngobuhle' yiNkosi Byron
Imigca Uya kuyithanda: 'Uhamba ngobuhle, njengobusuku / Kwimozulu engenamafu kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi / Kwaye konke okusemandleni amnyama nokuqaqambileyo / Ukudibana nembonakalo yakhe kunye namehlo akhe / Ngenxa yoko kuyakhanya kolo khanyiso luthambileyo / Leliphi izulu Usuku olunqabileyo luyala. '
Imibongo yothando inokusikhuthaza ukuba sisebenze ubukhulu, isenze sibe nomfanekiso-ngqondweni okanye sitsibe iintliziyo zethu-kodwa ngamanye amaxesha zinokusenza sihleke nathi! Ukuba imibongo yothando ngothando i-sappy kakhulu kukhetho lwakho, jonga le mibongo yothando. Le mibongo yothando ehlekisayo sisikhumbuzo esihlaziyayo sothando olunokuba luhlekisayo nolungenangqondo. UMegan Rubey
'Litany' nguBilly Collins
Imigca Uya kuyithanda: 'Nguwe umpheki omhlophe wombhaki / kunye neentaka zomgxobhozo ngesiquphe xa zibaleka / Nangona kunjalo, awunguye umoya kwigadi yeziqhamo / i-plums kwikhawuntara / okanye indlu yamakhadi / Kwaye ngokuqinisekileyo ayinguye umoya onuka ipayini / Akukho ndlela yokuba ungumoya onuka kamnandi. '
'Ihempe' nguJane Kenyon
Imigca Uya kuyithanda: 'Ihempe ichukumisa intamo yakhe / kwaye igudise umqolo wakhe / Ityibilika emacaleni / Ihle iye ezantsi kwebhanti- / iye ezantsi ebhulukhweni / kwihempe yakhe yeLucky.'
'UCelia, uCelia' ngu-Adrian Mitchell
Imigca Uyakuthanda: 'Xa ndibuhlungu kwaye ndidiniwe / Xa ndicinga ukuba lonke ithemba lihambile / Xa ndihamba neHorborn ephezulu / ndicinga ngawe ndingenanto.'
'ICinderella' nguRoald Dahl
Imigca Uya kuyithanda: 'Wagijima waphuma kwiingubo zakhe zangaphantsi / Walahlekelwa yinye isiteyiti kwizitepsi / INkosana yayikulo njenge-dart / Wayicinezela entliziyweni yakhe /' Intombazana ifanelekile, 'wakhala / 'Ngomso kusasa uya kuba ngumtshakazi wam! / Ndiza kutyelela yonke indlu edolophini / Ndide ndiyilandele le ntombazana!'
'Ewe, Ndiza kutshata nawe, Othandekayo wam' nguPam Ayres
Imigca Uya kuyithanda: 'Nguwe omele usebenze i-drill / kwaye ubeke i-curtain track / Kwaye xa ndifumana i-PMT nguwe ofumana i-flak / ndibona izinto ezintle / Kodwa akukho nanye kubo / kwaye Phambi kokuba ubone ukukhanya / NDIYENZA, NDIYENZA, NDIYENZA! '
Ufuna ukuthandana ebomini bakho? Le mibongo yothando imnandi, iyathandeka kwaye iyavuya, konke ngaxeshanye. Nayiphi na kule mibongo yothando iya kuba kukuhambelana ngokugqibeleleyo neemvakalelo ezibhalwe kwisikhumbuzo okanye kwikhadi lomtshato. UMegan Rubey
'Ingoma yothando' nguRainer Maria Rilke
Imigca Uyakuyithanda: 'Kodwa yonke into esichukumisayo, mna nawe / usithatha njengesaqhu sevayolin / esikhupha ilizwi libe linye kwimitya emibini eyahlukeneyo.'
'Jonga' nguSara Teasdale
Imigca Uyakuyithanda: 'Ukumanga kukaStrephon kulahlekile / uJobin ulahlekile kumdlalo / Kodwa ukwanga emehlweni kaColin / kundikhathaza ubusuku nemini.'
'Ukuphuma kwelanga' nguJohn Donne
Imigca Uya kuyithanda: 'Khanya apha kuthi, kwaye uhlala kuyo yonke indawo / Le bhedi yindawo yakho, ezi ndonga, indawo yakho.'
'Catull 5' nguCatullus
Imigca Uya kuyithanda: 'Ndipheni iwaka, elinye ikhulu / elinye iwaka, elinye ikhulu / kwaye, xa sibala amawaka / sibaphambanisa ukuze singabazi bonke / ukuze kungabikho tshaba Unokuphosa iliso elibi / ngokwazi ukuba kukho ukumanga okuninzi. '
'NgeToni eVuliweyo' nguPaul Verlaine
Imigca Uya kuyithanda: 'Ngenene, masithambise uthando lwethu / Kwinzolo ethe cwaka, njengoko / Amasebe agobele phezulu ngaphezulu / Sijikeleze izithunzi zawo kuthi.'
Uthando lunokuba nzima, lube lukhulu kwaye lube ngaphezulu. Kwaye yeyiphi indlela engcono yokubonisa loo nto ngaphandle kombongo ngothando? Le mibongo yothando inzulu yeyona nto ibonakalisa uthando. UMegan Rubey
'Imililo Emikhulu' nguJack Gilbert
Imigca Uya kuyithanda: U-Isaya wathi umntu ngamnye uhamba ngomlilo wakhe / ngenxa yezono zakhe. Uthando lusivumela ukuba sihambe / kumculo omnandi wentliziyo yethu ethile. '
'Xa Umdala' nguWilliam Butler Yeats
Imigca Uya kuyithanda: 'Bangaphi abathandayo amaxesha akho obabalo oluvuyayo / Kwaye bathande ubuhle bakho ngothando lobuxoki okanye oluyinyani / Kodwa enye indoda yathanda umphefumlo womhambi kuwe / Yazithanda iintlungu zobuso bakho obuguqukayo.'
'Amarhanisi Asendle' NguMary Oliver
Imigca Uya kuyithanda: 'Akunyanzelekanga ukuba ulunge / Akunyanzelekanga ukuba uhambe ngamadolo akho / iikhilomitha ezilikhulu entlango, uguquke / Kufuneka uvumele isilwanyana esithambileyo somzimba wakho sithande oko sikuthandayo . '
'Ukwabelana ngesondo ngaphandle kothando' nguSharon Olds
Imigca Uya kuyithanda: 'Benza njani, abo benza uthando / bengenalo uthando? Intle njengabadanisi / ukujija phezu komnye njenge-ice skating / ngaphezulu komkhenkce, iminwe ibotshelelwe / ngaphakathi emzimbeni womnye, ubuso / bomvu njenge-steak, iwayini, imanzi njengaye / abantwana ekuzalweni oomama babo abaza / babanike. '
'Izipho' zikaJuliana Horatia Ewing
Imigca Uya kuyithanda: 'Uthetha ngamatye anqabileyo aphuma kwamanye amazwe / Ngobuncwane, amaxhoba, kunye nebhaso / Ah uthando! Andizukukhangela izandla zakho / Kodwa jonga emehlweni akho. '
Ngaba ujonge imibongo yothando ebhalwe ngeSpanish? Uya kuthi te amo kwezi! Ukusuka kwimibongo yothando ebabazekayo uPablo Neruda kuleyo yombhali waseMexico u-Amado Nervo, le mibongo yothando ngeSpanish intle kulo naluphi na ulwimi. UMegan Rubey
'Sonnet XVII' nguPablo Neruda
Imigca Uya kuyithanda: 'Andikuthandi ngokungathi uvukile ityuwa, itopazi / okanye utolo lokuqamba olwasasaza umlilo / Ndiyakuthanda njengezinto ezithile ezimnyama zithandwa / ngasese, phakathi kwesithunzi nomphefumlo.'
'Undiphuze kakhulu' ngu-Amado Nervo
Imigca Uya kuyithanda: 'Wabona ukuba eli gama lifutshane / ukuba iseyile, eyonzakele ngumsindo / yomoya, yayisele ilindile ..., kwaye kuxinzelelo lwayo / yayifuna ukundishiya umphefumlo wayo / ukubeka ngonaphakade. '
'Rima XXIV' nguGustavo Adolfo Bécquer
Imigca Uya kuyithanda: 'Izimvo ezimbini eziphuma kunye / ukwanga okubini okuqhuma ngaxeshanye / ii-echoes ezimbini ezidibanayo / leyo yimiphefumlo yethu emibini.'
'Uthando' nguJuan Ramón Jiménez
Imigca Uyakuthanda: 'Uthando, lunjani ivumba lalo? Kubonakala ngathi, xa umntu ethanda / ukuba umhlaba wonke unamahemuhemu entwasahlobo / Amagqabi awomileyo ajika kwaye amasebe anekhephu / kwaye uhlala evutha kwaye esemncinci, enuka ivuko laphakade. '
ILlama De Amor Viva nguSan Juan de la Cruz
Imigca Uya kuyithanda: 'Uthozame kangakanani kwaye unothando / uyakhumbula esifubeni sam / apho uhlala ngokufihlakeleyo / kunye nokunqwenela kwakho okumnandi / okuhle kunye nozuko olupheleleyo / indlela ondenza ngayo ukuba ndithandane'
apho ukuthenga incwadi yomcwangcisi womtshato
iikhabhathi zeenkuni ezingwevu
uyithenga njani i-geofilter
ezihlekisayo iingoma zomtshato wokuqala